दृष्टिविहीनको मत हालीदिने व्यक्तिलाई प्रभावमा पार्ने कोसिस ! – GoldenKhabar.com
दृष्टिविहीनको मत हालीदिने व्यक्तिलाई प्रभावमा पार्ने कोसिस !
सुर्खेत, १७ मंसिर । छ महिना अघि स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सुर्खेतकी दृष्टिविहीन भीमा आचार्यलाई भोट हालेकोजस्तो अनुभूति नै भएन ।
सहयोगीको रुपमा भतिजीलाई सँगै लिएर भोट हाल्न जानुभएकी उनले भने “भतिजीले कसलाई भोट हालिन थाहै भएन” आफ्नो मतको गोपनीयता हँुदैन की भन्ने चिन्ता छ वीरेन्द्रनगरकी मेनका आचार्यलाई पनि ।
“हामी जस्तालाई विद्युतीय विधिबाट मतदान गर्ने व्यवस्था भइदिएमा हाम्रा मतको गोपनीयता हुने थियो” उनले भने, “तर, राज्यले हाम्रा बारेमा कुनै पहल नै गरेको छैन ।”
सुर्खेतकी सुमोना खड्काको गुनासो पनि उस्तै छ । “दृष्टिविहीनको मत कसले हाल्छ भन्ने थाहा पाएपछि मत हालीदिने व्यक्तिलाई प्रभावमा पार्ने कोसिस गरिएको हुन्छ” उनले भने, “त्यसकारण त्यो मत हाम्रा लागि बदर हुने सम्भावना पनि हुन्छ ।” मत हाल्नका लागि लगिएका व्यक्तिले आफूले चाहेका व्यक्तिलाई मत दिने र हामीहरुले भनेका व्यक्ति नपर्ने पनि हुनसक्ने उनले बताए ।
निर्वाचन अधिकृत पनि कुनै पार्टीसँग आस्था राख्ने भएकाले दृष्टिविहीनले भनेकै व्यक्तिलाई मत दिएको भन्ने विश्वास पनि गर्न कठिन हुने खडकाको भनाइ थियो ।
गोप्य मतदान भनिए पनि मतदान गरिएको केही समयमा नै जानकारी बाहिर आउने भएकाले आफूहरूलाई असहज हुने दृष्टिविहीन वसन्त जैसीले बताए ।
उनले अघिल्लो स्थानीय निकायको निर्वाचनमा मतदान गर्न आफ्नो भाइलाई दिने भएको थाहा पाएपछि भाइलाई नै प्रभावमा पार्न थालिएको बताए ।
निर्वाचन अधिकृत सुनिता थापाले दृष्टिविहीन र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको मताधिकारका लागि चुनौती भएको बताए । रासस